केपी ओली : नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि किन उपयुक्त छैनन् ? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » बिचार/ब्लग → केपी ओली : नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि किन उपयुक्त छैनन् ?
केपी ओली : नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि किन उपयुक्त छैनन् ?
October 18, 2015४९५ पटक
सबै चिजलाई मध्यनजर गर्दा वर्तमान परिस्थितिमा ओली प्रधानमन्त्री पदका लागि सही व्यक्ति होइनन् । अघिल्लो सरकारले छाडेका राजनीतिक झमेलालाई ओलीले झनै खराब बनाउन सक्छन् ।
विवादास्पद नयाँ संविधानले नेपाललाई नाममात्रको भए पनि धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ । र, त केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र नेपालको आठौँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिँदा जनता र देशका नाममा सपथ लिए । ईश्वरको नाममा सपथ लिने परम्परालाई निरन्तरता दिएनन् ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो कामका रुपमा उनले हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्वीको संयुक्त पर्वका रुपमा रहेको रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई साथ दिए । स्टालिनवादी प्रधानमन्त्री ओलीको अधिकांश राजनीतिक करिअर यस्तै विरोधाभाषले परिभाषित छ ।
गरीब ब्राम्हण परिवारमा जन्मिएका ओली भारतको सिलिगुढीको सीमानामा पर्ने झापा जिल्लास्थित धनाढ्य नक्सलवादी नेता रामनाथ दाहालको घरमा हुर्किए ।
उनी सन् १९७० को दशकमा प्रतिवद्ध अतिवादी वामपन्थीका रुपमा हुर्किए, जतिबेला झापाली कम्युनिष्टहरुले विश्वको एकमात्र हिन्दु देशमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने भन्दै वर्गसत्रुको टाउको छिनालिरहेका थिए । सन् १९७३ मा जेल परेका ओली १४ वर्षसम्म जेलभित्रै रहे ।
सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना तथा मनमोहनजस्ता मार्क्सवादी र मदन भण्डारीजस्ता लेनिनवादीको मिलनपछि बनेको एमालेको गठनसँगै ओलीको नायकत्व तिव्र रुपमा बढ्यो ।
नयाँ पार्टीका रुपमा स्थापित एमाले राष्ट्रवादी कम्युनिज्मको स्टालिनवादतर्फ अघि बढेसँगै ओली उक्त दलको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष बने ।
त्यसलगत्तै उनी तिब्ररुपमा पदोन्नती भए । भलै उनी आफ्ना सहपाठी ज्वलन्त कामरेडहरुले जस्तो मार्क्सवादको अध्ययन गर्नुको साटो चेस खेलेर धेरै समय कटाउँथे ।
वास्तवमा पार्टीको प्रचार प्रमुख हुँदा ओलीले युक्ति भन्दा पनि रणनीतिको प्रयोग गरे ।
सन् १९९० को पूर्वार्धमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको जुझारु प्रतिपक्षको रुपमा रहँदा उनले अति वामपन्थी अर्थात् मसालहरुको मन जित्न सफल भए ।
सन् १९९० को दशकको मध्यतिर मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा गृहमन्त्री रहेका ओलीले काठमाण्डौको स्थायी शक्तिवाला कुलीन वर्ग, खासगरी राजावादी वा मण्डलेहरुलाई पार्टीमा तान्न सफल भए ।
उनको दोस्रो सत्तारोहण पनि कम महत्वपूर्ण रहेन । सन् २००७ को अन्तरिम सरकारमा उनी विदेश मन्त्रीमा नियुक्त भए । दिल्लीमा नेपाल सरकारको प्रमुख प्रतिनिधिको रुपमा उनले भारतको नेपाल नीतिलाई प्रभावित गर्न सफल भए । सम्भवतः गिरिजाप्रसाद कोइराला मार्फत उनले पनि शक्तिशाली अन्तराष्ट्रिय खेलाडीहरुसँग मित्रता कायम गर्न सफल भए ।
ओलीको अनुभव तथा तालिमले त्यतिबेलै पूर्णता पाएको थियो । तर, नेपालमा शासन गर्ने आफ्नो जीवनको लक्ष्य भेटाउन उनले थप ८ वर्ष कुर्नुपर्‍यो । र, यसको एउटै कारण हो : उनले सन् २००६ को जनआन्दोलनमा उठेको गणतन्त्रको एजेन्डालाई बयलगाडामा चढेर चन्द्रमामा पुग्ने सपना भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।
सन् २०१३ को दोस्रो संविधानसभा चुनावले उनको स्टालिनवादी रणनीतिको उपजका रुपमा रहेको उक्त कथनको पाप पखालिदियो ।
विविध अनुभवले युक्त ओली एक जटिल तर सम्मोहक व्यक्तित्व हुन् । उनको लोकपि्रयतालाई निम्न सर्वहाराले मन पराउँछ र अनुजहरुलाई संरक्षण गरेकोमा पूजा गर्छ । तर, निम्नबुर्जुवा, नीतिहीन नवधनाढ्य, जसले आफ्ना अपराधहरु सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तथा रित्तो नाराको पर्दा पछाडि लुकाउन चाहन्छन् । उनीहरुले अल्पसंख्यकप्रति गर्ने सदावहार टिप्पणीका कारण उनलाई राष्ट्रवादी जोकर ठान्दछन् ।
तर, वास्तवमा उनले नेपाली प्रजातान्त्रिक राजनीतिक वृत्तमा खिल्ली उडाएर भन्ने गरिएको माले, मसाले र मण्डलेको गठबन्धन बनाएकै हुन् ।
गठबन्धन निर्माण गर्नु एउटा कुरा । तर, ओलीका लागि साझेदार दलहरुका परस्पर विरोधी लक्ष्यलाई व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चुनौतिका रुपमा रहेको छ । उनको आफ्नै पार्टी एमालेमा समेत शास्त्रीय मार्क्सवादीहरुले ओली आफ्नो पार्टीभन्दा पनि शक्तिवान कुलीन तथा विभिन्न स्वार्थ समुहप्रति बढी कृतज्ञज्ञ रहेको आरोप लगाउन सक्छन् । यद्यपि उनले एमालेको प्रभावशाली गुटलाई शान्त पार्नका लागि मन्त्रीमण्डलमा सहभागिताको उपाय अपनाउनेछन् । तर, शक्ति राजनीतिमा जहिले पनि बढी नै आशा गरिएको हुन्छ ।
पुष्पकमल दाहाललाई खुसी राखिराख्नु अर्को कठीन कार्य हुनेछ । आफ्नो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी टुक्रिएको भए पनि प्रचण्ड क्षमतावान शक्ति हुन् र ओली सरकारको आयु कायम राख्न उनको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
त्यस्तै ओली गठबन्धनका अरु साझेदार विजयकुमार गच्छदारले, मधेसी तथा कमल थापा, राजावादीले पनि अवश्य आफ्ना एजेण्डा टेबुलमा ल्याउनेछन् ।
सन् १९९० को दशकको तुफानी वेगको एमालेको रणनीतिकारका रुपमा रहेका ओलीले प्रष्ट रुपमा के बुझेका छन् भने कुनै पनि सरकारलाई आफ्नो हनिमुन कालमा तिव्र विरोधको सामना गर्नुपरोस् भन्ने चाहना हुँदैन ।
अहिले देश बहुआयामिक संकटमा परेको र सुरुवातमै जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको हुँदा उनले सुरुबाटै चुनौतिपूर्ण यात्रा थाल्नु परेको छ ।
गठबन्धनका साझेदारहरुको स्वार्थ बाझिएर त्यसले समग्र शासनमै असर पार्ने खतरा छ
संविधान घोषणा हुनु अघिदेखि नै मधेसीहरुले यसका गैरन्यायिक प्रावधानहरुको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । दुई महिनादेखि आन्दोलनका क्रममा ४० भन्दा बढीको सर्वसाधारणको ज्यान गैसकेको छ भने सयौँ घाइते भएका छन् ।
यो परिस्थितिको समाधानबाटै नयाँ सरकार, जुन मुख्यतया मधेश इतरको समर्थनमा बनेकोे छ, उसको क्षमताको जाँच हुनेछ । मधेसीप्रतिको विगतको जस्तै विषवमनले विवेकशील समझदारीको उपयुक्त वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नेछैन ।
सन् १९८९ मा व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी मतभेद तथा राजा विरेन्द्रको नेपाल शान्ति क्षेत्र प्रस्तावका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध कठीन मोडमा पुगेको थियो र भारतले नेपालमा आपूर्ति रोकेको थियो ।
अहिले परिस्थिति उतिसारो बिगि्रइनसकेको भए पनि सामानहरुको आपूर्तिमा देखिएको व्यवधान, जसलाई काठमाण्डौले अघोषित नाकाबन्दी भनेको छ, त्यसले पहाडी क्षेत्रमा बलियो भारतविरोधी भावनाको सिर्जना गरेको छ । मधेसीहरुले भने आफूहरुको समयको माग बमोजिमको अत्यावश्यक सहयोग भन्दै त्यस्तो कदमको स्वागत गरेका छन् ।
यी सबै भावनालाई सन्तुलन गर्नका लागि ओलीले देशभित्र वार्ता तथा बाहिर कुटनीतिको माध्यमबाट आफुले २५ वर्षको शक्ति राजनीतिमा आर्जन गरेको सम्पूर्ण कौशलको उपयोग गर्नुपर्नेछ ।
शासनको विषय पनि कम महत्वपूर्ण छैन । अपि्रलको भूकम्पपछि अन्तराष्ट्रिय दाताहरुबाट प्राप्त ४ अर्ब डलरमध्ये सरकारले अलिकति पनि खर्च गर्न सकेको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनका लागि आवश्यक कानूनसमेत ओलीकै पार्टीको कठोरताका कारण पारित हुन पाएन ।
त्यसैले पछिल्लो ६ महिनादेखि विकास निर्माण कार्य ठप्प छ । त्यसैले ओलीले पहाडको अत्यधिक अपेक्षा तथा मधेसको बढ्दो असन्तोषका बीच कम्तिमा पनि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ ।
ओलीलाई बिचौलियाबाट काम गराउने मान्छेको रुपमा चिनिन्छ र अहिले पनि त्यसलाई छाड्ने छैनन् । तराई मधेसको आन्दोलनको सम्बोधनका लागि उनी सम्भवतः माओवादी र गच्छदारमा भर पर्नेछन् ।
एमाले पार्टी लामो समयदेखि व्यवसायिक एकाधिकारीहरु, सेवा सिन्डीकेटहरु तथा विभिन्न आवरणका गैरसरकारी संस्थाहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेको छ जसबाट चुनावका बेला पार्टीका कार्यकर्ताका लाग राम्रो आम्दानीवाला रोजगारी प्राप्त हुन्छ र पार्टीको ढुकुटीमा राम्रो रकम जम्मा हुन्छ
सम्झौता तथा प्रशासनिक डण्डा लगाएर मधेसी दलहरुलाई एकठाउँमा ल्याउने र अनि स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने उनको रणनीति हुने देखिन्छ ।
भारतसँगको समझदारीका लागि ओलीले शक्तिशाली कुलीन वर्गको श्रोतको उपयोग गर्नेछन् । काठमाण्डौमा यस्तो हल्ला फैलिएको छ कि दुबै देशमा व्यवसायिक स्वार्थ भएका अर्बपतिहरुले दिल्लीलाई आस्वस्त पार्दैछन् अनि भन्दैछन् आफ्नो राजनीतिक लाइन पारित गराइदिने शर्तमा दिल्लीसँग कुनै पनि व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ओली तयार छन् ।
वास्तवमा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै आपूर्ति व्यवस्था पनि केही खुकुलो बनेको छ । यद्यपि यो रणनीतिको प्रभावकारिता भने हेर्न बाँकी नै छ ।
शासनको हकमा प्रधानमन्त्रीले गैरसरकारी संस्थालाई लगाउनेछन् र पुनर्निर्माणको काममा नाफामूलक क्षेत्रलाई संलग्न गराउनेछन् । वास्तवमा एमाले पार्टी लामो समयदेखि व्यवसायिक एकाधिकारीहरु, सेवा सिन्डीकेटहरु तथा विभिन्न आवरणका गैरसरकारी संस्थाहरुको साझा मञ्चको रुपमा रहेको छ जसबाट चुनावका बेला पार्टीका कार्यकर्ताका लाग राम्रो आम्दानीवाला रोजगारी प्राप्त हुन्छ र पार्टीको ढुकुटीमा राम्रो रकम जम्मा हुन्छ ।
प्रस्तावित परिवर्तनले गर्न खोजेको भनेको अन्तरिम संविधानको व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्नु हो । प्रान्तहरुको सीमांकनको विषय पुनः छलफलबाट टुंगाइनुपर्छ । तर, यो सजिलो भने हुनेछैन । किनकि यसले ओलीको दलको बाहुन तथा क्षेत्रीबाहुल्य निर्वाचन क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा मधेसी तथा थारुहरुको हित घुसाउनेछ । यो विषय सुल्झाउने सन्दर्भमा माओवादीको प्रभावकारिता पनि सन्देहपूर्ण छ ।
भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि ओली बिचौलियाकै निकै भरपर्ने देखिन्छ । यस्तो निकट सम्बन्धमा उच्च राजनीतिक तहमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासको खाँचो हुन्छ । तर यसका लागि ओली न त सक्षम छन् , न त यसो गर्न चाहन्छन्
हिन्दुवादी शक्ति तथा व्यवसायिक लवीहरुको पोल्टामा परराष्ट्र नीति छाडिदिनुका आफ्नै बेफाइदा छन् । पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको अभाव हुनुका साथै अनधिकृत च्यानलहरुको माध्यमबाट प्राप्त हुने प्रतिवद्धताहरु प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा पूरा हुन गाह्रो हुन्छ ।
भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि ओली बिचौलियाकै निकै भरपर्ने देखिन्छ । यस्तो निकट सम्बन्धमा उच्च राजनीतिक तहमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासको खाँचो हुन्छ । तर यसका लागि ओली न त सक्षम छन् , न त यसो गर्न चाहन्छन् ।
भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा देखिएको सिथिलताका कारण अन्तराष्ट्रिय समुदाय वाक्क भएका छन् । त्यसैले विदेशी सहायतालाई एमाले निकट गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन गर्ने ओलीको प्रस्तावलाई काँध थाप्नेहरु भेटिने सम्भावना रहनेछैन । त्यसैले गठबन्धनका साझेदारहरुको स्वार्थ बाझिएर त्यसले समग्र शासनमै असर पार्ने खतरा छ।
सबै चिजलाई मध्यनजर गर्दा वर्तमान परिस्थितिमा ओली प्रधानमन्त्री पदको लागि सही व्यक्ति होइनन् । अघिल्लो सरकारले छाडेका राजनीतिक झमेलालाई ओलीले झनै खराब बनाउन सक्छन् ।
स्रोत : क्याच न्युजबाट अनुदित अनलाईनखबर बाट